India : Ireo Mafàna Fo Ambaniana Manadio An’i Mombai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2017 14:33 GMT
Navoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanan'ny vondron'ny haino aman-jery nahazo loka tany India ity lahasoratra nosoratan'i Madhura Chakraborty ity. Misy dikanteny voasoratra avoaka etsy ambany ho fandraisana anjara amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty amin'ny Global Voices.
Mpiasa mpifindra monina an'arivony no ampiasain'ny Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), fikambanana misahana ny fahadiovan'ny tanàndehibe manankarena indrindra any India, hanao fanadiovana mialohan'ny talio isan-taona. Mitaky ny asan'ireo mpiasa mpifindra monina izay matetika miasa tsy ara-dalàna amin'ny fomba fiaina tsy araka ny maha-olona io fanadiovana io, tena hita niharihary izany nandritra ny tondradrano tany Mombai vao haingana teo.
Ny 29 Aogositra, nanimba zavatra be tany Mombai ny oram-batravatran'ny talio, nandrava ny rafi-pitaterana tao amin'ilay an-tanàndehibe goavana izay misy mponina 18 tapitrisa eo ho eo. Manodidina ny roapolony eo ho eo ny olona maty nianjeran'ny trano avo be iray rehefa nivadika ho renirano ny làlana iray tany amin'ny renivohitra ara-bolan'i India.
Noho ny tsy fahampian'ny rafitry ny lakandrano maloto araka ny tokony ho izy, dia hita any India ny faharatsian'ny fitandroana ny fahasalamana toy ny fangerena an-kalamanjàna. Ny saranga farany ambany, Dalita, no manadio izany amin'ny fandraofana izany amin'ny tànana ( fanadiovana ny loton'ny olona – tay sns..- amin'ny tànana).
Taterin'i Amol Lalzare, Naman'ny Video Volunteers Community sady mpitondra tuc-tuc any Mombai fa :
Ny BMC dia vondrona iray manambola be miandraikitra ny fahadiovan'ny tanàndehibe. miaraka amin'ny tetibola mihoatra ny 25.000 crore ropia indiana ( 3,8 lavitrisa dolara amerikana eo ho eo), ka nahatonga ny olom-pirenena hanontany tena hoe nahoana izy no tsy afaka mikarakara tsara ireo izay manao io asa tena ilain'ny tanàna io. Apetrak'ireo mpikatroka mafana fo fa hamaivanin'ny BMC ny ain'ireo mpiasa mpanadio satria na ny saranga farany ambany indrindra amin'ny fiarahamonina no fiavian'izy ireo.
Araka ny angondrakitra omen'ny BMC dia 1386 ireo mpiasa mpanadio ny tontolo iainana 1386 no maty hatramin'ny 2009, ary mpiasa sivifolo no efa maty tamin'ity taona ity. Ny fikarohana dia mampiseho fa tena ambany, 52 taona monja no fetram-pahavelomana ho an'izay manao karazana asa io.
Naneho ny hatezerany tamin'ny BMC ny mponin'i Mombai noho ireo matin'ny tondradrano ary maro ireo zava-boalaza momba ny ‘ fanahin'i Mumbai’. Saingy raha mbola nifampiarahaba tao amin'ny haino aman-jery sosialy ny mponin'i Mombai noho ny hatsaran'ny fanahiny, dia alaivo sary an-tsaina i Anil 12 taona any anaty rano maloto hatreny am-balahana tontolo andro, mikarakara ny fahadiovan-dry zareo.